Tsara indrindra. Valandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety. Mandrakizay. | Martech Zone
Asabotsy 16 Febroary 2013 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Mahazo famoahana gazety am-polony ao anaty boatin-tsika isan'andro isika ary heveriko fa ny 99% amin'izy ireo dia voafafa indray mipi-maso. Tsy midika akory izany hoe tsy mahasoa izy ireo… mijery hatrany ny ampahan-dahatsoratra misy ifandraisany izahay ka hisy fiantraikany eo aminareo eo amin'ny fiarahamoninay. Ny tombony amin'ny famoahana gazety dia ny fizarana mahomby… ny tsy fanao dia tsy dia soratana firy izy ireo ary ankoatr'izay - tsy dia lasibatra loatra.
Rehefa nanontany an'i Dittoe PR izahay dia Fifandraisana amin'ny vahoaka ry mpiara-miombon'antoka, hamoaka famoahana amin'ny rindrambaiko iPhone, niverina niaraka tamin'izy ireo izy ireo famoahana gazety an'ny app mobile Tena tsy mampino izany raha tsy zaraina. Manantena aho fa mankafy azy io toa ny nataonay… nahazo valiny lehibe izahay!
Martech Zone Mandefa ny fampiharana finday maimaim-poana voalohany-maimaim-poana
Indianapolis–Ao anatin'ny apps mobile "revolisionera" 775,000, "fanaperana" ary "mitsoka saina" mipetraka amin'ny Apple App Store, Martech Zone dia mandray dingana feno fahasahiana anio amin'ny fandefasana ny rindranasa finday vaovao tsy misy fampiasana buzzwords na hyperbole be loatra.
Loharano iray an-tserasera amin'ny vaovao momba ny haitao marketing, hevitra momba ny vokatra, serivisy ary fomba fanao tsara indrindra izay mitana ny laharana "Blog Marketing Top" nataon'i Herin'ny Advertising Age's 150, Martech Zone dia manamafy ny toerany amin'ny tantara miaraka amin'ny hany fampiharana iOS handefa azy tsy misy fikasana na inona na inona amin'ny fanavaozana ny haitao finday na fampidirana "changer lalao" amin'ny indostrian'ny marketing.
Martech Zone Ny fampiharana dia mamela ny mpampiasa hamaky, hizara ary hitahiry ireo lahatsoratra farany, torolàlana, infografika ary ny fomba fanaovana marketing an-tserasera, marketing anaty, marketing amin'ny atiny, marketing amin'ny motera fikarohana, marketing amin'ny finday, marketing amin'ny haino aman-jery sosialy sy maro hafa.
Na eo aza ny fanakianana mahery vaika avy amin'ireo mpiorina amin'ny indostria izay miady hevitra amin'izany Martech Zone mpanorina Douglas Karr raha tokony hitrandraka io fotoana io hanasongadinana ny fiantraikan'ny fampiharana vaovao amin'ny tontolo iainana nomerika, ny matihanina amin'ny varotra anatiny dia mijanona ho hentitra amin'ny fomba fanao.
Te hampandeha mora foana ny votoatinay amin'ny mpamaky amin'ny sehatry ny fitomboana haingana izahay, ”hoy i Karr. “Nisy fotoana naha-be resaka ahy momba ny rindranasa finday. Nieritreritra aho fa tsy maintsy niandry mandra-pahatongan'ny HTML5 sy ny mpizaha finday izahay dia hanjavona tsotra izao ny fomba fampiasa lozisialy desktop. Saingy, mbola tsy vitany izany ary mitombo hatrany ny fotoana lanin'ny olona amin'ny fampiharana finday.
Teo anelanelan'ny Desambra 2011 sy Desambra 2012, ny salan'isa nampiasaina tamin'ny fampiharana finday dia nitombo 35 isan-jato hatramin'ny 94 minitra ka hatramin'ny 127 minitra isan'andro, raha nihena kely kosa ny fizahana tranonkala, araka ny tatitra vao haingana momba ny fironana amerikana nataon'ny finday. Analytics mafy maimaika.
Nahazo famporisihana noho ny fitomboan'ny fotoana ahafahana manao mpijery amin'ny alàlan'ny finday i Karr Postano Mobile hanangana rindranasa ho an'ny Martech Zone.
Ireo olona tao Postano dia tsy namela vato tsy voavadika, hoy i Karr. Nanangana rindranasa namboarina tsara izy ireo – manomboka amin'ny fampidirana sokajy ka hatrany amin'ny podcast tafiditra.
To download the maimaim-poana Martech Zone fampiharana, tsidiho ny iTunes App Store.
Tags: dittoe prfifandraisan'ny daholobeny fomba fanoratana fanambarana an-gazetyPodcast Marketingpostanopostano findayprmpanao gazetyfizarana gazetyvalandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazetyfifandraisana amin'ny vahoaka
16 Mey 2013 tamin'ny 5:36 hariva
Ity lahatsoratra bilaogy ity dia marina tsara amin'ny ezak'izy ireo hamaritana ny vokatra ankasitrahako.
Ny fampiharana dia ampy indrindra amin'ny famolavolana azy. Manoro hevitra azy tsy misy famandrihana aho, nefa koa tsy maika maika. Ireo izay mankafy ny atiny amin'ity tranonkala ity dia tokony hisintona an'ity fonosana rindrambaiko ity, saingy tsy tokony handrava fotoana nifanarahana izy ireo, tsy hiraharaha ny namana na ny fianakaviana, tsy hiala sakafo, na handà ny fitsaboana.
Azafady mba diniho ny fisintomana azy. Na, mandehana milalao any ivelany. Na inona na inona tianao.
16 Mey 2013 tamin'ny 7:05 hariva
Tena tiako be ilay izy! Fivarotana varotra tena mahafinaritra miaraka amina toerana tsara. Ka oviana no navoaka ny kinova droid? ;-)
17 Feb 2013 tamin'ny 12:20 maraina
Manantena izahay fa ho avy tsy ho ela!